नवलपरासीका किसानको उखुको रकम भुक्तानी गर्न गरियो यस्तो माग.::Leading Nepal News
नवलपरासीका किसानको उखुको रकम भुक्तानी गर्न गरियो यस्तो माग.
बैशाख ०९, नवलपरासी । नेपाली कांग्रेस नवलपरासीले उखु किसानको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न माग गरेको छ । ढिलो गरी सञ्चालनमा आएका उद्योगले अहिलेसम्म किसानको उखु खरिद गरी नसकेको अवस्था र खरिद गरेका किसानको पनि रकम भुक्तानी नगर्दा समस्यामा परेको जनाउँदै भुक्तानी गर्न कांग्रेसको जिल्ला समिति बैठकले माग गरेको हो।
उद्योगले खरिद गर्न ढिलाई गरेका कारण किसानको खेतमा अझै २० प्रतिशत उखु काट्न बाँकी छ।किसानको उखु खरिद नगरेसम्म उद्योग बन्द नगर्न समेत बैठकले उद्योगीलाई आग्रह गरेको छ। विभिन्न कारण देखाउँदै लुम्बिनी चिनी उद्योग बन्द भइसकेको छ। मर्मतका कारण देखाउँदै केही उद्योग नियमित सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। कार्यवहाक जिल्ला सभापति अर्जुन पोखरेलको अध्यक्षता र केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेलको आतिथ्यतामा सम्पन्न बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता कुलदिप आचार्यद्धारा जारी विज्ञप्तिमा मिल सञ्चालन भएको ३५ दिनभित्र भुक्तानी गर्ने सहमति गरेपनि अहिलेसम्म भुक्तानी नगर्दा किसान समस्यामा परेको उल्लेख छ।
जिल्लाका उद्योगहरु दुई महिनाअघिबाट सञ्चालनमा आएका हुन्। गतवर्षको बाँकी रकम र अहिले उपलब्ध गराएको उखुको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ। इन्दिरा चिनी उद्योगले गतवर्षको मात्र करिब साढे ५ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ। त्यसैगरी बैठकले बैशाख ११ देखि जेठ ११ गतेसम्म सञ्चालन हुने पार्टीको राष्ट्रिय जागरण कार्यक्रममा सहभागिता हुन सबै जिल्ला तहका कार्यकर्ताहरुमा आग्रह गरेको छ। बैठकले भूजहवा र विस्नुपुरा नाकाबाट भारतीय सवारीसाधनलाई दिइदै आएको सुविधा पासलाई सहज बनाउन पनि भन्सार कार्यालयसँग माग गरेको छ।